10 Reasons Why Extracurricular Activities Are Important - Leading Asia Myanmar
သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းများ အရေးကြီးရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်း (၁၀)ချက်
Article by Bhavana Narayan
“စာအလုပ်တွေပဲလုပ်ပြီး ကစားဖို့အချိန်မပေးတာက ဂျက်ကို ဉာဏ်ထုံထိုင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ဖြစ်သွားစေတယ်” ဆိုရိုးစကားဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ အင်မတန် မှန်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယနေ့ခေတ် ကလေးတွေဟာ “ကစားတာလျှော့၊ စာပိုလုပ်” ဆိုပြီး ဆုံးမတာပဲ ခံယူနေရပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်ကလေးတွေဟာ အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ ပျမ်းမျှစာမေးပွဲရမှတ် (GPA – Grade Point Averages) သို့မဟုတ် အင်မတန်မြင့်မားတဲ့ (တကယ်ကို မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် မြင့်မားလှတဲ့) ရာခိုင်နှုန်းကို ရအောင် အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရပါတယ်။ ကောလိပ်တွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေအများစုရဲ့ ကျောင်းဝင်ခွင့်အမှတ်တွေ အမြင့်ကြီးနဲ့ ဖြတ်လိုက်တဲ့ ကျေးဇူးပါလေ။ စာမေးပွဲတွေရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကလေးတွေဟာ စာကလွဲရင် တခြားဘာမှ လုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်မရှိဘဲ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အချိန်ကို ကြုံရပါတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့ သင်ရိုးမာတိကာတွေဟာ ကျယ်ပြန့်လွန်းတော့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ဝါသနာပါရာတွေကို လေးလေးနက်နက်လေ့လာဖို့ အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ ကျောင်းတွေနဲ့ ကောလိပ်တွေဟာ အသိအမှတ်ပြုခံရမှုကို လေလံဆွဲသကဲ့သို့ ကြိုးစားရယူရင်း ကျောင်းသားတွေကို အဆင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ အင်မတန်မြင့်တဲ့အမှတ်တွေရရေးကိုပဲ အရေးစိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ ရလဒ်ကိုပဲဦးတည်ပါတယ်။ ဖိအားတွေ၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေကြောင့် ကျောင်းသားတွေဟာ ကျောင်းကို အိပ်မက်ဆိုးသဖွယ် ခံစားလာရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ သူတို့ကို ဒီလို အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးမှာ ဘာကြောင့်များ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပေးနေကြပါသလဲ။ အခုလို အခြေအနေမှာတော့ ပညာရေးရဲ့ နယ်ပယ်ဟာ ကောင်းကျိုးပေးရာကနေ အသွင်ပြောင်းလဲပြီး ဆိုးကျိုးပေးလာပါတယ်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ဒါကို အနည်းငယ် အသွင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ပြီးပြည့်စုံစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာပါ။
ကလေးတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အိမ်ပြင်ထ္ွက်ဆော့ကြတဲ့နေ့ရက်တွေဟာ ကုန်လွန်ခဲ့ပါပြီကော။ ယခုအချိန်မှာ သင်ဟာ သူတို့ကို စာအုပ်တွေကို သေချာစွာဖတ်ရှုနေတာ၊ သို့မဟုတ် အင်တာနက်မှာ ချိတ်နဲ့ချိတ်ထားသလို တွဲကပ်နေတာကိုသာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သင်ရိုးမှာပါတဲ့ ဘာသာရပ်တွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မသဘောတူပါတယ်။ ဘာသာရပ်တွေကို လစ်လျူရှုရမယ်လို့ ကျွန်မ မမြင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ ဘာသာရပ်တွေမှာ ကောင်းကောင်းသင်ယူတတ်မြောက်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အသိပညာဗဟုသုတဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သင်ရိုးပြင်ပသင်ကြားမှုတွေကို နောက်ပို့ပစ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နှစ်မျိုးစလုံးဟာ အညီအမျှ အရေးပါကြီးပါတယ်။ သင်ရိုးပြင်ပသင်ကြားမှုတွေဟာ အပန်းဖြေမှုအတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ပညာရေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုမရောက်ဘဲ ကျရှုံးပါတယ်။ မိဘတွေနဲ့ ဆရာတွေဟာ သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းများမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့တိုက်တွန်းရာမှာ တက်ကြွနိုးကြား စိတ်ဝင်စားသင့်ပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးဟာ ဘာကြောင့် သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေဟာ အရေးကြီးပြီး လစ်လျူရှုရန် မသင့်ကြောင်း အချက် (၁၀) ချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀) သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေဟာ အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်ပူးတွဲတင်ရတဲ့ ပညာရည်မှတ်တမ်းအကျဥ်းမှာ အမြင်တင့်တယ်စေတယ်။
ကျောင်းသားမိဘ ဘယ်လောက်များများက ဒီအချက်ကို သတိထားမိသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်မ မသေချာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ပါ။ အိန္ဒိယနှင့် အခြားနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့ ဂုဏ်သတင်းမြင့်မားကောင်းမွန်တဲ့ တက္ကသိုလ်အများစုဟာ စာပေဘာသာရပ်များထက်ပိုတဲ့ ပညာရည်မှတ်တမ်းကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အဆင့်နှင့် အမှတ်တွေကို ကျော်လွန်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ အနာဂတ်ရဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဘယ်လောက်အောင်မြင်သလဲ ဆိုတာကို ဘက်ပေါင်းစုံမှတ်ကျောက်များကို ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ လုပ်ငန်းလှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုတွေကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျွန်မအမြင်တော့ ဒါကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ပြန့်နှံ့အောင် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်လိုတဲ့ ကျောင်းသားများအတွက် သင့်လျော်ပြီး၊ ယေဘုယျဆိုရလျှင် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရပ်များမှာ ကျွမ်းကျင်ထူးချွန်တာဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်စဥ်မှာ ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုဟာ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတို့ကို ရရှိစေပါတယ်။ အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ သက်လုံကောင်းစေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျတ်လတ်နိုးကြားမှုကိုလည်း ပိုမို အားကောင်းစေပါတယ်။ စွမ်းအင်မြင့်တက်စေတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကလေးတွေဟာ မောပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အကြောင်း မကြာခဏ ညည်းတွားကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုလျှင် သူတို့ဟာ ပတ်ပြေးပြီး ဆော့ကစားတဲ့ အလေ့အထမရှိလို့ပါပဲ။ ကလေးများကို သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းစဥ်တွေမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်စေခြင်းဟာ သူတို့ကို တက်ကြွနိုးကြားပြီး ခွန်အားပြည့်စေပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ကို အထိုင်များတဲ့ နေ့စဥ်ငြီးငွေ့ဖွယ်အခြေအနေကနေ ဆွဲထုတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို စိတ်အားထက်သန်စေပြီး မြူးကြွလာစေဦးမှာပါ။
(၈) သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေဟာ အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ဆောင်မှုကို သင်ကြားပေးပါတယ်။
ငယ်စဥ်ကတည်းက အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာ ကောင်းမွန်စွာ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် သင်ယူခြင်းဟာ အင်မတန် ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ သီးခြားကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာမှာအင်မတန်ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေနှင့် ကွဲပြားနေတတ်ပြီး အသားကျဖို့ အချိန်များစွာလိုကြပါတယ်။ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် အငြင်းပွားမှုတွေကို အခင်မင်မပျက် ဖြေရှင်းခြင်း၊ လူအများကို သဘောတူလက်ခံလာစေခြင်းနှင့် အပေးအယူအညှိအနှိုင်းပြုရန် ကြိုးစားခြင်းတို့ဟာ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာ လုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပြီး ဒါဟာ လုပ်ငန်းခွင်မရောက်ခင်ရှိထားတဲ့ အတွေ့အကြုံက လာပါတယ်။ သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေကနေ ကလေးတွေကို ဒီလို အတွေ့အကြုံတွေနှင့် ထိတွေ့စေခြင်းဟာ သူတို့ကို လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပြီး သန်စွမ်းစေပါတယ်။
(၇) သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ဖြစ်ပေါ်စီးဆင်းစေပါတယ်။
သိလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်း၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဥ်မှ ခွဲထွက်စဥ်စားခြင်းနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာ မွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဟာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ရေပိုက်ခေါင်းလို လှည့်ဖွင့်လို့မရပါဘူး။ ဒါကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ပြုစုပျိုးထောင်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေက နည်းမှန်လမ်းမှန်ပျိုးထောင်ဖို့ရာ အတိအကျ အကူအညီပေးပါတယ်။ အနုပညာရပ်များ၊ ဂီတနှင့် စာပေသီကုံးခြင်း၊ စတာတွေဟာ တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုတွေပါပဲ။ ကလေးတွေ ဒီလိုအရာတွေမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ အသိအမြင်အသစ်တွေ ပွင့်လင်းလာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ တွေးပုံခေါ်ပုံတွေ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အရင်ကနှင့်မတူ ကွဲပြားစွာ အသစ်တီထွင်ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။
တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာ မည်သို့မျှ အကန့်အသတ်နယ်နိမိတ် မရှိပါချေ။ သင့်မှာ ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခါ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အလားအလာအခွင့်အလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဖက်တွယ်ဆုပ်ကိုင်ထားရမယ့် ကြီးမားတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပါ။ ဒီကျွမ်းကျင်မှုဟာ သင့်ကို သူမတူအောင် ထူးချွန်အောင်မြင်စေလိမ့်မယ်။
(၆) ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ လူမှုဘဝအတွက်
တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်ရိုးဘာသာရပ်တွေကိုပဲ ကော်ကပ်သလို လေ့လာဖတ်ရှုနေခြင်းဟာ သင့်ဆီ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကို ရောက်မလာစေဘူးဆိုတာ သင်သတိထားမိကောင်း ထားမိပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့အစစ်အမှန်လောကမှာတော့ သင်အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှသာ လူသစ်တွေနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လူမှုရေးရာ ပါဝင်လှုပ်ရှားကာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် လူသစ်တွေနှင့် တွေ့ဆုံပြီး သင်နှင့် ဝါသနာတူတာကို သိလိုက်တဲ့အချိန်ဟာ သင်တို့ကို လက်တွဲခိုင်မြဲတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ စတင်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။ အုပ်စုလိုက် လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေမှာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားစေဖို့ အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားကစားရင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အုပ်စုလိုက်ကခုန်ရင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကို အချိန်မှန်တွေ့ဆုံပြီး အဆက်အသွယ်မပြတ်ရှိနေကာ၊ နောက်ပိုင်းမှာ သင့်ကို သံယောဇဥ်ဖြစ်စေပြီး အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စိတ်လက်ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
(၅) စိတ်ဖိစီးမှုကို ချေဖျက်ပေးသောအရာတွေ
ယနေ့ခေတ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေ၊ ရုံးတက်နေရတဲ့သူတွေမှ စိတ်ဖိစီးမှုကြုံရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေပါ စိတ်ဖိစီးမှုရဲ့ သားကောင်အဖြစ် ကြုံနေကြပါပြီ။ အများနှင့် ယှဥ်ပြိုင်ရတဲ့ စာမေးပွဲတွေ၊ ပထမရဖို့ ကြိုးစားရတဲ့ အတန်းတွင်းပြိုင်ပွဲတွေ၊ အပတ်စဥ် စာမေးပွဲတွေဟာ ကလေးတွေကို စိတ်ဖိစီးစေပါတယ်။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ရေးဝဝ အိပ်စက်အနားယူခြင်းကလွဲလျှင် သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေဟာ အဲဒီစိတ်ဖိစီးမှုကိုချေဖျက်ရာမှာ သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အင်မတန်လိုအပ်နေတဲ့ အားလပ်ချိန်နှင့် အပန်းဖြေမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ စိတ်ကို အေးချမ်းသွားစေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တင်းကျပ်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ သူတို့ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
(၄) ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် ဦးစားပေးအစီအစဥ် ချမှတ်ခြင်း
သင်ဟာ အလုပ်တွေကို တစ်ပြိင်နက်တည်း လုပ်ဆောင်စဥ်မှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဦးစားပေးအစီအစဥ် ချမှတ်မှုမှာ တိုးတက်ကျွမ်းကျင်လာပါတယ်။ ဘဝမှာ တစ်ခုထက်ပိုပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတွေအများကြီး သင်ကြုံလာရမှာပါ။ အဲဒီအတွက် လူတိုင်းရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ကျွမ်းကျင်မှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု လိုလာပါတယ်။ နောက်ပြီး အချိန်အကန့်အသတ်အတွင်း မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်နိုင်ဖို့ရာ ဦးစားပေးအစီအစဥ်ချမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေနှင့် နှိုင်းယှဥ်လိုက်လျှင် အရေးပါတဲ့အရာတွေကို အရေးကြီးမှန်း လက်ခံယူဆရမယ်။ စပါးခွံနှင့်ဆန်ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဦးစားပေးအစီအစဥ်ချမှတ်ခြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းအများအပြားမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကွဲပြားတဲ့အရာတွေကို ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်ရာနှင့် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ရာမှာ ကလေးများရဲ့ အရည်အချင်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။
(၃) မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တန်ဖိုးထားမှု မြင့်တက်ခြင်း
နိမ့်ကျစိတ်ထားဖွဲ့စည်းမှုနှင့် မိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုကင်းမဲ့ခြင်းဟာ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုကင်းမဲ့ခြင်းရဲ့ ခံစားချက်ကနေ ပေါ်ထွက်ပါတယ်။ အကြိမ်ရေအများစုမှာ လုပ်နေကျအလုပ်ကနေလှမ်းထွက်ပြီး တစ်ခုခုကိုမှ မကြိုးစားဖူးတဲ့ကလေးတွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီခံစားချက်ကို ခံစားလာရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဟာလာဟင်းလင်း ဗလာကျင်းနေတဲ့စိတ်ဟာ နတ်ဆိုးရဲ့ အလုပ်ရုံပါပဲ။ အကယ်၍သာ ကလေးတွေ လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုအမြောက်အများမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်နေလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အပျက်သဘောဆောင် အတွေးတွေတွေးဖို့ အချိန်မရှိတော့ပါဘူး။ အလုပ်တွေအများအပြားလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာ သူတို့ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ ခံစားရစေပြီး သူတို့ကို မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်တန်ဖိုးထားမှု မြင့်တက်စေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာပြီး၊ နောက်ထပ်ထိတွေ့မှုတွေကို ပိုမိုရရှိကာ သူတို့ကို အသိပညာဗဟုသုတပိုမိုတိုးပွားပြီး အတွေ့အကြုံလည်း ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။
(၂) ပြည့်ဝစွာ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးမှု
နေရာတော်တော်များများမှာထူးချွန်သူတွေကို တစ်ခုတည်းမှာပဲမှန်ကန်အောင်လုပ်နိုင်သူတွေထက် လူတွေက ပိုမိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းတွေမှာ ကလေးတွေကို အားပေးတိုက်တွန်းတဲ့အခါ သူတို့ကို ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအမြောက်အများကို ရရှိတတ်မြောက်လာစေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပြည့်စုံစွာ ကြီးပြင်းလာကြပါတယ်။ သင်ဟာ နယ်ပယ်စုံမှာ ကျွမ်းကျင်လျှင် သင်ဟာ ပိုပြီးယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ သင်ဟာ ပိုပြီး အမှီအခိုကင်းကာ လွတ်လပ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင့်မှာ အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးရှိလာပြီး စွယ်စုံကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ အဖြုအမည်းတစ်ရောင်တည်းခြယ်မဟုတ်ဘဲ သင့်ကို သတ်မှတ်တဲ့ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိလာပါလိမ့်မယ်။
နှောင့်နှေးမနေပါနှင့်။ သင့်ဘဝရဲ့ ပိတ်ကားချပ်ကို အရောင်ပေါင်းစုံ ပုံစံပေါင်းစုံနှင့် ဆေးခြယ်ပါလေ။ ရိုးလွန်းတဲ့ရှုခင်းပုံ မဆွဲပါနှင့်။ တစ်မူထူးခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါစေ။
(၁) သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းများဟာ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပါရမီကို နည်းမှန်လမ်းမှန် ထိန်းချုပ်အသုံးချစေတယ်။
လူတိုင်းမှာ ထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်တွေ ပါရှိပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ဟာ ပုန်းအောင်းအိပ်စက်ရာမှ မနှိုးမချင်း မီးခဲပြာဖုံးသကဲ့သို့ ငုပ်လျှိုးနေပါတယ်။ အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖမ်းဆုပ်ရယူပြီး သင်တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါ စွမ်းရည်နိုးကြားလာပါတယ်။ သင်ဟာ သင်ရဲ့ အားသန်ရာကို အသေအချာ ရွေးထုတ်ခွဲခြားလာနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာကောင်းတစ်ခုကို ရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ကလေးတွေကို သင်ရိုးပြင်ပလုပ်ငန်းအများအပြားမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပါရမီကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသင်ယူမိမှာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ အားသာချက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေနှင့် ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ပါရမီကို ရှင်းလင်းစွာ ရွေးထုတ်နိုင်မှာပါ။ အဲဒီအခါ သူတို့ဟာ အရင်က မသိခဲ့ရတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှုထောင့်သစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလာကြမယ်။ ဒါဟာ ပုံမှန်သမားရိုးကျမဟုတ်ပေမယ့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် အသက်မွေးမှုအလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်စရာတွေဆီ ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ဘာတွေကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲတိုးတက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ဤဆောင်းပါးသည် အောက်ဖော်ပြပါ အင်တာနက်စာမျက်နှာကို Leading Asia Myanmar International Schoolမှ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Image credit: https://clipartart.comextracurricular activities
PrevPreviousThe Universe Depicted in English and Maths Languages
Nextအဝေးမှသင်သော ကျောင်းရက်တစ်ရက်ဟာ ဘယ်လောက်ကြာရှည်သင့်သလဲ။Next
Submitted by lam_admin on Sat, 03/28/2020 – 16:15 Registration OPENS NOW for 2020!
Preparing students to be active participants inalifelong journey of learning
Preparing students to be active participants inalifelong journey of learning Leading Asia Myanmar International School focuses on the development of the whole child
Online Program Starting Now
We are so excited to announce that Leading Asia Myanmar International School is going to start Online Program for 2020-2021 Academic year in December. We
Today is very first day of the School. Today Leading Asia Myanmar’s Pre-KG, KG, Grade 1 and2students were enjoying their respective EAL classes,
Vacancy Announcement (Burmese Language Teacher)
Vacancy Announcement (Burmese Language Teacher) Preamble Asacandidate school for the IB DP and on the way to becoming an IB World School, the
Dream together, Grow together, Strive to lead the furure.
No.(S-1) 12th Street, Bet 86th & 87th Streets, Aung Myay Tharzan Township, Mandalay, Myanmar.
© 2022 Leading Asia Myanmar. All rights reserved.
Student Inquiry Form for Online Class